2009-08-30 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​အ​ပေါ်​က error ​ပေါ်​လာ​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက်​ပါ .. ​ဘာ့​ကြောင့် ​ဒီ error ​ပေါ်​လဲ​ဆို​ရင် window XP SP2 ​သုံး​တဲ့​သူ​များ​အ​တွက် xp sp2 ​က Realtek HD Audio Control Panel ​ကို ​လက်​မ​ခံ​တာ​ပါ . ​ကိုက်​ညီ​မှု​မ​ရှိ​တဲ့​အ​ခါ ​အ​ခု​လို​ပေါ်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​အ​တွက် microsoft ​က ​တင်​ပေး​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို downlaod ​လုပ်​ပြီး ​ဖြေ​ရှင်း​လဲ​ရ​သ​လို realtek ​ကို updating ​လုပ်​တဲ့​နည်း​နဲ့​လဲ ​ဖြေ​ရှင်း​လို့​ရ​ပါ​တယ် ..
​ပ​ထ​မ​တစ်​နည်း​က microsoft ​က ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို Download ​လုပ်​ပြီး run ​လိုက်​ပါ . Download ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက် ​ဒီ​ကို ​သွား​လိုက်​ပါ .
​နောက်​တစ်​နည်း​က ​အ​ခု​လက်​ရှိ ​သုံး​နေ​တဲ့ realtek ​ကို update ​လုပ်​ဖို့​အ​တွက် ​ဒီ​ကို ​သွား​ပြီး High Definition Audio Codecs (Software) ​ကို download ​လုပ်​ပါ ..
​မ​လုပ်​တတ်​ရင် High Definition Audio Codecs (Software) ​ကို ​က​လစ်​လိုက်​ပါ . ​ပေါ်​လာ​တဲ့​အ​ကွက်​မှာ I accept to the above ​ကို ​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​ပြီး Next ​ကို ​နှိပ်​ပါ .. ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ကို​တင်​ထား​တဲ့ window ​ကို ​ရွေး​ပါ . ​ရွေး​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ဟို​ဖက်​အ​ခြမ်း​က GO Go GO ​ဆို​တာ​တွေ​က download ​လုပ်​ဖို့ link ​တွေ​ပါ . ​ပုံ​နဲ့ ​မ​ရှင်း​ပြ​တော့​ဘူး . ​မ​နက်​ကျ​မှ ​ထပ်​တင်​ပေး​မယ် . ​အ​ချိန်​မ​ရှိ​တော့​ဘူး . Office ​ပိတ်​တော့​မယ် .